BOINC: Rindrambaiko informatika mizana be sy lehibe | Avy amin'ny Linux
BOINC: Rindrambaiko informatika mizana be sy lehibe
«BOINC» dia lozisialy noforonina sy zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana open source fantatra amin'ny hoe «Licencia Pública General Reducida de GNU (Lesser General Public License - LGPL)». Ka, ankoatry ny zavatra hafa, dia azo ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra, tsy misy fameperana lehibe.
Ity rindrambaiko ity dia novolavolaina manokana hanaovana Tetikasan'i «Computación de alto rendimiento y gran escala»Raha atao teny hafa, mba hanamorana sy hanatanterahana ny fampiharana ireo sehatra informatika izay misy solosaina an'arivony na an-tapitrisany manerantany.
«BOINC»azo ampiasaina amin'ny Tetikasa fanaovana informatika an-tsitrapo, izany hoe amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana isan'andro ho an'ny fanjifana betsaka, na Grid Computing, izany hoe amin'ny alàlan'ny fampiasana loharanon-karena informatika, daholobe na tsy miankina. Lavitra, «BOINC» manohana ny fampiasana fampiharana virtualized, parallèle ary mifototra amin'ny GPU.
Antony nahoana, amin'izao fotoana izao «BOINC»ampiasaina amin'ny maro izy io tetikasa IT mpilatsaka an-tsitrapo, maro amin'izy ireo no mifandray fikarohana siantifika, ampahibemaso ary / na tsy miankina, ny ankamaroany dia nataon'ny anjerimanontolo sy laboratoara fikarohana. Tetikasa izay, matetika ny olona rehetra no afaka mandray anjara handray anjara amin'ny fotoana rehetra.
1 Tetikasa BOINC amin'izao fotoana izao
Tetikasa BOINC amin'izao fotoana izao
«BOINC»dia lozisialy noforonina, nampiantranoina ary notohanan'ny University of California, in Berkeley, nanomboka tamin'ny 2002, miaraka amin'ny famatsiam-bola ny ankamaroan'ny Fikambanan'ny siansa nasionaly amerikana. Ka ny anao tranokala ofisialy dia ampiantranoina ao amin'ny fonenanao. Izay namela ny rindrambaiko, ny kaody loharano, ny antontan-taratasy ary ny fivoarany mba ho azon'ny vondrom-piarahamonina iray liana amin'ny tetik'asa lehibe toy izany.
Mikasika ireo tetikasa aiza«BOINC» efa nampiasaina tamim-pahombiazana hitantsika fa ny farany indrindra, ny iray namboarin'ny «Universidad de Bristol (Inglaterra, Reino Unido)» amin'ny alàlan'ny ekipa tarihin'ny mpampianatra «Andrew Booker» ary miaraka amin'ny «Andrew Sutherland», mpampianatra matematika «Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)».
Ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hamaha amin'ny alàlan'ny rafitry ny solosaina antsoina hoe «Motor de Caridad (Charity Engine)» iza no zatra «BOINC» amin'ny fototra, ny olana malaza sy taloha an'ny «Suma de los 3 Cubos» ho an'ny manokana ny isa 42. Araka ny azonao ampitomboina ity rohy manaraka ity: «Soluciones de la Ecuación Diofantina x^3+y^3+z^3=k».
Amin'izany fomba izany «Charity Engine», izay sehatra mampiasa ny herin'ny kaonty mihoatra ny 500 solosaina an-trano, raha tsy miasa izy ireo, ny dingana mitovy amin'ny manisa ora iray tapitrisa mahery, hahazoana ny valin'ny olan'ny solosaina voalaza.
Tetikasa siantifika 30 eo ho eo no ampiasaina «BOINC». Tetikasa siantifika amin'ny faritra maro izay mety miainga amin'ny fikarohana aretina, ny fiakaran'ny marin'izao tontolo izao ka hatramin'ny fandalinana ny astronomia sy ny toetr'andro sarotra, ankoatry ny faritra maro hafa, toy ny Mikaroha fiainana ivelan'ny tany izay entin'ny olom-pantatra tetikasa «SETI».
Anisan'ireo tetikasa ekena sy mahaliana indrindra ny:
CAS @ Trano
Cosmology @ Trano
Einstein @ Trano
Enigma @ Trano
LHC @ Trano
Milkyway @ trano
MindModeling @ Trano
Rosetta @ trano
SETI @ an-trano
Universe @ Trano
Grid ho an'ny fiarahamonina eran-tany
Ary raha te hahalala bebe kokoa momba ny tsirairay amin'izy ireo sy ny hafa ianao dia kitiho ity rohy manaraka ity: Tetikasa BOINC.
Mampiseho antsika izany el «Software Libre y de Código Abierto» nampiasaina tsara, toy ny amin'ny «BOINC», azonao atao ve ny mamela anay ampio amin'ny sehatry ny maro fikarohana siantifika farany, na mampiasa solosaina finday eny amin'ny Ivotoerana Fikarohana malaza na Laboratoara siantifika malaza na fampiasana solosaina tsotra amin'ny misy Rafitra miasa (Windows, Mac, Linux) na fitaovana ho an'ny mpanjifa marobe, toy ny fitaovana finday na finday misy Android.
Ankoatr'izay, ny tombony an'ity karazana teknolojia ity dia ny ahafahantsika mandray anjara tsy misy sorona lehibe amin'ny fampiasana ny fitaovantsika manokana, satria ny ankamaroany sy amin'ny tranga manokana momba ny «BOINC», misintona ireo torolàlana na asa ilaina amin'ny solosaina ametrahana azy izy ary avy eo dia manatanteraka ny fizotrany ilaina any aoriana. Ny fanaovana ny asa izay niniana natao ho mora sy azo antoka, tsy manelingelina na miteraka olana amin'ireo mpampiasa tompona fitaovana.
Sahiko ny mieritreritra fa ity karazana rindrambaiko ity dia afaka mamaha ny iray amin'ireo sakana lehibe indrindra ananantsika miaraka aminy.«Software Libre y de Código Abierto», inona ny fanohanana ara-bola.
Satria mifototra amin'izany dia misy tetikasa iray azo noforonina izay mampisy dividends, amin'ny vola na cryptocurrency, ho an'ireo izay mampihatra izany amin'ny «Sistemas Operativos», ka taty aoriana ireo fidiram-bola fanampiny ireo dia ampiasaina handoavana na fanomezana bebe kokoa Tetikasa rindrambaiko maimaimpoana.
Eny, toy ny mahazatra, tianao ity lahatsoratra ity, aza atsahatra ny fanehoan-kevitra momba azy io mba hampanan-karena bebe kokoa ity famakiana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » BOINC: Rindrambaiko informatika mizana be sy lehibe
GNU vs. Google: malware ny rindrambaiko Google
Sehatra ZeroNet hamoronana tranokala itsinjaram-pahefana